दीभित्र मौलाउ“दो अपराध ः सुन तस्करीदेखि - Marganugami Daily
Marganugami Daily Apradh Khabar Breaking राजनीति विचार दीभित्र मौलाउ“दो अपराध ः सुन तस्करीदेखि
दीभित्र मौलाउ“दो अपराध ः सुन तस्करीदेखि
महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) चन्द्रसिंह भाट र प्रहरी जवान पुष्कर शाह कात्तिक पहिलो साता पाँच लाख घुस रकमसहित पक्राउ परे । नेपाली सेनाका अवकास प्राप्त हवल्दार ग·ा देवानलाई झुटो मुद्दा खडा गरेर २० लाख बार्गेनिङ गरेपछि ग·ा पत्नी विनिताले अख्तियार गुहारेकी थिइन् ।
पाँच लाख घुस लिँदालिँदै पक्राउ परेका भाटले बालाजु वृत्तका तत्कालीन डीएसपी नवीनकृष्ण भण्डारीको निर्देशनमा काम गरेको खुलेपछि अख्तियारले कात्तिक २० गते चार जना प्रहरी अधिकारी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले डीएसपी भण्डारी, असई चन्द्रसिंह भाट, सोही प्रकरणमा जोडिएका इलाका प्रहरी कार्यालय फर्पिङका हवल्दार मनोज यादव र महानगरीय प्रहरी प्रभाग बाल सुधार गृह ठिमीमा कार्यरत प्रहरी जवान पुष्कर शाहलाई निलम्बन गरेको छ । अहिले उनीहरु मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) कुलबहादुर राई अवैध सुनसहित माघ १८ गते बालुवाटारबाट पक्राउ परे । राईलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र अपराध महाशाखाको संयुक्त टोलीले २० तोला अवैध सुनसहित नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
एयरपोर्टमा ड्युटी अफिसरको रूपमा सादा पोशाकमा ड्युटी गरिरहेका राईले कतारबाट परवेज आलमले ल्याएको अवैध सुन गोल्डेन गेटबाट पास गराएका थिए । त्रिभुवन विमानस्थलको रनवेबाट सीधै डोमेस्टिक टर्मिलनमा सुन लगेर राखेका राईले साँझपख उक्त सुन आफ्नो डेरामा लिएर गएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
माघ १५ गते कलड्ढीको सगुन होटलमा प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) र एक जवानले जुवाखाल कब्जा गरेर ४ लाख ५० हजार लुटपाट गरे ।
कलड्ढीको सगुन होटलमा बर्दीमै पुगेका महानगरीय प्रहरी प्रभाग कलड्ढीमा कार्यरत सई मदनबहादुर मल्ल र प्रहरी जवान मनोहर बुढाले जुवाडेलाई लखेटेर पैसा लुटेर हिँडेका थिए । प्रहरी स्रोतका अनुसार मल्लले ४ लाख ५० हजार लुटेका थिए भने प्रहरी जवान बुढाले १२ हजार नगद र मोबाइल लुटेपछि मोटरसाइकल चढेर फरार भएका थिए । काठमाडौँ प्रहरीले प्रहरी जवान मनोहर बुढालाई निलम्बन गरिसकेको छ भने प्रनानी मदन मल्ललाई विभागीय कारवाहीका लागि महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा सिफारिस पत्र पठाएको छ । अनुसन्धानका लागि प्रनानि मल्ललाई महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा तानिएको छ ।
चार महिनायता उपत्यकामा घटेका उल्लेखित तीन घटनाबाट के पुष्टि हुन्छ भने राष्ट्रसेवाको कसम खाएका नेपाली प्रहरीका सिपाहीदेखि डीएसपी तहसम्म अपराध गरेरै भए पनि कमाउने मानसिकता बढ्दै गएको छ । आखिर बर्दीमा किन अपराध मौलाइरहेको छ ?
अपराध अनुसन्धानमा लामो समय विताएका पूर्वआईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल भन्छन, ‘यस्ता घटना निरन्तर घट्नु स·ठनका लागि दुःखद् कुरा हो, किन यस्तो भइरहेको छ भन्नेबारे अध्ययन हुनु जरुरी छ ।
अर्यालले औँल्याए जस्तो नेपाल प्रहरीले स·ठनभित्र यस्तो घटना बढेपछि अध्ययन थाल्न सकेको छैन । घटना विशेष छानविन समिति बनाउने त्यसपछि रिपोर्ट पेश गरेर संलग्नलाई निलम्बन या नसिहत दिनेभन्दा माथिको कारवाही पनि गरेको पाइँदैन । कतिपय अवस्थामा पहुँचवाला अफिसरले राजनीतिक दबाब दिएर त्यस्ता अपराधबाट सजिलै उन्मुक्ति समेत पाउने गरेका उदाहरण भेटिन्छन् ।
‘गैरकानुनी काममा संलग्न हुने जवान वा अफिसरलाई दण्डित गर्नु एउटा पक्ष हो पूर्वप्रहरी प्रमुख अर्याल थप्छन, ‘यसका विविध पाटा हुन्छन, मनोवैज्ञानिक तवरले अध्ययन गरेर कारण निदानका लागि स·ठनले कदम चालेमा सुधार आउँछ ।
सिपाहीले घुस खाए, असईले लागूऔषध नेपाल प्रहरीका जुनियर अफिसर अर्थात असई हुन् सुमित राज सिटोला । सामाजिक अपराध अन्त्य गर्ने प्रण गर्दै प्रहरीको बर्दीलगाएका सिटौला आफैं माघ ३ गते लागूऔषधसहित पक्राउ परे । संघीय प्रहरी कार्यालय बागमतीमा कार्यरत असई सिटौलालाईलाई घटनास्थल विशेषज्ञ (सोको) तालिममा आएको बेला महाराजगञ्जमा लागूऔषध सेवन गरेको अवस्थामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
झोलामा २३ पिस नाइट्रोभ्याट र १ सय १० ग्राम गाँजा फेला परेपछि अहिले सिटौला महाराजगञ्ज प्रहरीको हिरासतमा बसेर लागूऔषध मुद्दा खेपिरहेका छन् । बरामद गरिएको छ । २ फाइल नाइट्रोभ्याट (३० पिस) मध्ये सिटौलाले ७ पिस आफैंले सेवन गरेको बताइएको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार सिटौला कलेज पढ्दादेखि नै लागूऔषध सेवन गर्थे । उनका बाबु पनि नेपाल प्रहरीको बहालवाला इन्सपेक्टर छन् । छोरालाई लागूऔषधबाट छुटाउन प्रहरी सेवामा पठाएका बाबु समाज सुधार्ने कसम खाएको छोरो नसुूिएपछि उनी आफैं चकित बनेका छन् ।
प्रहरी जवान मनोज परसैल जनकपुरस्थित लक्ष्मीनिया अस्थायी प्रहरी चौकीमा कार्यरत थिए । सेवाग्राहीलाई मदिराको लाइसेन्स बनाइदिन्छु भन्दै घुस मागेका मनोज माघ २० गते १० हजार नगदसहित अख्तियारको फन्दामा परेका छन् ।
घटना माघ १८ गतेको हो । प्रहरीसँगै घुस माग्ने भक्तपुरको दधिकोट प्रहरी चौकीमा कार्यरत प्रहरी जवान उमेशकुमार थापा १८ हजार नगदसहित पक्राउ परे । प्रहरी कर्मचारीको स्कुटर र ट्रिपर चालकबीचको दुर्घटना विवाद मिलाइदिन्छु भन्दै उनले घुस मागेपछि पीडित प्रहरीले अख्तियारमा सूचना दिएपछि थापा अख्तियारको प्रहरी टोलीकै फन्दामा परेका थिए ।
प्रहरी स·ठनले मनोवैज्ञानिक अध्ययन गरेर कारण पत्ता लगाएमा बदीभित्रको अपराध शून्यमा झार्न सकिन्छ ? रातोपाटीको जिज्ञासामा पूर्व आईजीपी अर्याल भन्छन ‘यस्ता घटनलाई शून्यमा झार्न त सकिँदैन, किनभने यी र यस्ता व्यक्तिगत घटना हुन तर न्यूनीकरण गर्न अवश्य सकिन्छ । महानगरीय प्रहरी कार्यालयको कन्ट्रोलमा काम गर्थे प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) रेशम खड्का । तिनै खड्का माघ ८ गते बालाजुबाट ३ लाख घुस रकमसहित अख्तियारको फन्दामा परेका छन् । एउटा सहकारी संस्थाको कागजात फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि घुस मागेपछि उनलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा कार्यरत हवल्दार जनक महरा बाघको छाला कारोवारमा संलग्न रहेको पाइएको छ । माघ ५ गते महानगरीय अपराध महाशाखाले उनलाई न्युरोडबाट बाघको छालासहित नियन्त्रणमा लिएको थियो । बर्दीको आडमा वन्यजन्तुको छाला कारोबारमा रहेको प्रमाणित भएसँगै महानगरीय प्रहरी कार्यालयले उनलाई निलम्बन गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
‘हामीलाई कति ? भन्दै बलात्कार केस थामथुम ! माघ ७ गते काठमाडौँको दरबारमार्गस्थित ल्यान्डमार्क होटलमा भएको भनिएको सामूहिक बलात्कार घटना प्रहरी कार्यालसम्म नपुगेको हैन । तर, सामूहिक बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध प्रहरी इन्सपेक्टरले नै लेनदेनमा मिलाएपछि कसको के लाग्छ र ? त्यस्तै गरे, महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गका इन्सपेक्टर लक्ष्मण ठकुरी र मुद्दा शाखामा कार्यरत सई चन्द्र भण्डारीले ।
मुद्दा शाखामै कार्यरत इन्सपेक्टर ठकुरीले ‘हामीलाई कत्ति ? भन्दै आफूले समेत आर्थिक लाभ लिएर सामूहिक बलात्कार कागज गरेर मिलापत्र गराएको बाहिरिएपछि महानगरीय प्रहरी कार्यालय र काठमाडौँ प्रहरीले दुईवटा छुट्टाछुट्टै समिति बनाएर छानविन गरिरहेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले इन्सपेक्टर ठकुरी र सई चन्द्र भण्डारीलाई निलम्बन गरिसकेको छ । त्यस्तै दरबारमार्ग वृत्तका डीएसपी तिलक भारतीलाई अनुसन्धानका लागि काठमाडौँ प्रहरीमा हाजिर गराइएको छ । रातोपाटीबाट सभार
#Apradh Khabar #Breaking #राजनीति #विचार